2019 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများစာရင်း: ပြရန်ပါတီများ NAB ။ #NABShow @NABShow - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2019 NAB ပြရန် » 2019 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများစာရင်း: ပြရန်ပါတီများ NAB ။ #NABShow @NABShow
ကျနော်တို့က 2019 ဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင် NAB ပြရန် ပြီးနောက်-ပါတီများ, ကျနော်တို့နှင့်အတူဆက်စပ်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း NAB ပြရန်! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွညျ့ရှုနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ NAB ပြရန် အချို့သာဖိတ်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုပုံဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်အဖြစ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အပါတီအသေးစိတ်ကို။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြေးစာရင်းနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံပါ! ကျွန်တော်ရှာတွေ့သို့မဟုတ်အချက်အလက်လက်ခံရရှိအဖြစ်ကျနော်တို့ကို update ။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ 2019 လုပ်နေလုပ်နေအရာတခုကတော့ NAB ပြရန် ပါတီစာရင်းနှင့်အတူကကို update ဖြစ်ပါတယ် အားလုံး အခြား NAB ပြရန် ပြီးနောက်-ပါတီများ (တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်!) ။ ကျွန်တော်တို့၏ NAB ပြရန် ပါတီစာရင်း setup ကိုဖြစ်ပါတယ် သငျသညျညစဉ်ညတိုင်းအများအပြားပါတီများ hit နိုင်အောင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်! ပိုပြီးဖြစ်ရပ်များရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ Re-ပို့စ်ကဒီကိုစောင့်ရှောက်မည်! စာရင်း updated ခံရဖို့မျှော်လင့်ထား နေ့စဉ်!
E-mail: [အီးမေးလျ protected] နှင့် NAB ပြရန် ပါတီများသင်ဒီမှာမမြင်နိုင်ကြဘူး။
ဒီကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါစို့ 2019 NAB ပြရန် ပါတီစာရင်း!
နာရီပါတီများ & ပွဲများပြီးနောက် Show ကို NAB: 2019
မှတ်စု: Las Vegas မှနိုက်ကလပ်အသက်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမလိုအပ်နှင့်တင်းကျပ်သော Dress Code ကိုလိုကျနာ: NO ဘောင်းဘီတို, Sneaker, လှန်လာသောသေတ္တာ, t-ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ဦးထုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် လူကြီးလူကောင်းများအတွက်လျှော့ / ဂျင်းဘောင်းဘီ, collared ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပိတ်ထားသောခြေချောင်းစားဆင်ယင်ဖိနပ်လိုအပ်သည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင် entry ကိုပုတယောက်နဲ့တူပါတယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပါ!
Las Vegas မှာနေစဉ်စားရန်နေရာရှာဖွေနေပါသလား ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ပရိဘောဂနှင့်အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာ - အောက်တိုဘာလ 19, 2019
ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများ - အောက်တိုဘာလ 19, 2019
ဂျူနီယာကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ - အောက်တိုဘာလ 19, 2019
2019 NAB ပြရန် 2019 NAB ပြရန်ပါတီများ 2019 NAB Show ကိုပါတီစာရင်း 2019 NAB Show ကိုပါတီပါတီများ Las Vegas မှနီဗားဒါး NAB NAB 2019 ပါတီများပြီးနောက် NAB ပါတီပြီးနောက် NAB NAB ကွန်ဗင်းရှင်း Las Vegas မှ NAB ကွန်ဗင်းရှင်းပါတီများ အဖွဲ့ NAB ပါတီများ NAB Las Vegas မှာပါတီများ NAB NAB ပါတီ ပါတီစာရင်း NAB NAB ပြရန် NAB ပြရန်ပွဲများ NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB ပြရန်ပါတီများ NAB Show ကိုပါတီ Show ကိုပါတီစာရင်း NAB NAB2019 NABShow ပါတီများ NABShow ပါတီ လူငယ်ကဏ္ဍကွန်ဗင်းရှင်း၏အမျိုးသားအစည်းအရုံး တရားဝင် NAB ပါတီများ တရားဝင် NAB ပြရန်ပါတီများ တရားဝင် NAB Show ကိုပါတီ ပါတီတွေက ပါတီ	2019-04-02
ယခင်: အားလုံး NAB Show ကိုအစားကောင်းကြိုက်သူများ Calling: Las Vegas စားသောက်ဆိုင်များ! #NABShow @NABShow
နောက်တစ်ခု: Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB - 2019 ပြရန်ဇယား။ #NABShow @NABShow
NAB ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - Mike Baldassari
MacOS အတွက် ATTO Disk Benchmark ရောက်လာပြီ
Show ကိုနယူးယောက်မိတ်ဆက် Podcasts စီးရီးများနှင့်သီးသန့် Podcasts Sessions NAB
Clear ကို-Com / FreeSpeak Edge တင်ပြ NAB Show ကို New York မြို့မှာပွဲဦးထွက်တော်မူမည်
ခေတ်ပြိုင်သုတေသနရဲ့အသစ်လွင်ဆုံးဒီကုဒ်ဒါ / Controller ဒီကုဒ်ဒါ IPTV Streams သည်ပြီးပြည့်စုံသော Is